Iindaba -Imozulu yonke yeLosari yeCargo yeModeli yeTesla Y yesiqhelo seFit yangasemva kwesiqu somthi
Yonke imo-zemo yeCargo Liner yeTesla Model Y yesiqhelo Fit ngasemva kwesiqu semthi
I-All-Weather Cargo Liners yenzelwe ukukhusela indawo yakho yeempahla ekuchithekeni, amabala, udaka kunye nokungcola.
Imijelo enzulu iyahamba kwaye ibambe amanzi ngokufanelekileyo, ngelixa iindonga ezisecaleni eziphakanyisiweyo zibonelela ngokhuseleko kunye nokuthintela
ulwelo oluvuzayo kwikhaphethi.
Ubume bokumelana neskid bunceda ukugcina ukutya kunye nezinto ezikhuselekileyo kwindawo yokugcina ngaphandle kokutyibilika.
Sebenzisa itekhnoloji yokuchaneka kwe-laser ephezulu kakhulu, zonke ii-3D Cargo Liners zenziwe ukuba zilingane ngqo nesiqu somthi ngokuchaneka okuphezulu kunye nokugubungela umgangatho. Awudingi ukuba namava erabha angathandekiyo, kwaye akuzange kube lula ukuzicoca ezi matethi. Sula ngokucocekileyo ngelaphu elifumileyo, okanye ususe kwisithuthi sakho, cima ithumbu lakho kwaye wenze iimpahla zakho zempahla zibe ntsha kwakhona.
Inkqubo ye- Imitya elungelelanisiweyo yesiko kukukhusela ngaphakathi kwizithuthi zakho ngobuchule, obunemigangatho emithathu eyahlukileyo. Uyilo olunamacala amathathu olulinganiswe nemilinganiselo yangaphakathi yesithuthi sakho ekubambiseni ubumdaka kunye nokuchitheka. Umaleko welungelo lokushicilela ongezantsi onelungelo elilodwa lomenzi ugcina iimethi endaweni ngaphandle kokonakalisa ikhaphethi yoqobo. Umaleko wobuso obukekayo unikezela ngesitayile, ungangeni manzi, ukhuseleko ukukhusela ingaphakathi lakho.
Imodeli ye-Y TPR yemoto yemidlalo yesiqhelo esifanelekileyo yonke imo yemozulu yeCargo Liners lolukhuseleko lwangaphakathi kunye nenye yezona zinto zilungele izithuthi zakho. Usebenzisa itekhnoloji yokuskena kwe-laser, ilitha nganye yempahla ilinganiswa ukuze ilingane isiqu semoto ngokugqibeleleyo ngokuchanekileyo nangokugubungela umgangatho. Ulwakhiwo lwama-hybrid olwahlukeneyo olwenzelwe ukubonelela ngokhuseleko olupheleleyo lwezithuthi, ukufunxa ukungcangcazela, ukunciphisa ingxolo yendlela, kunye nokugcina ukutya kuthengiwe esiqwini ngaphandle kokutyibilika.
Ixesha Post: Oct-08-2020
Uyintoni umahluko phakathi kwakho ...
I-PVC kunye ne-TPE iinyawo